တောင်းပန်ပါတယ် Disqus၊ ငါကပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ | Martech Zone
တောင်းပန်ပါတယ် Disqus၊ ငါကပရိသတ်တစ်ယောက်ပါ။
အင်္ဂါနေ့, ဇွန်လ 16, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ဤပြissuesနာများအားလုံးပြေလည်သွားပြီး၊ Disqus ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်တိုးပွားလာသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်ပေါင်းစည်းမှုတို့ကြောင့် WordPress ဘလော့ဂါများသည်ပလပ်ဂင်ကိုတပ်ဆင်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်ရန်အလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ IntenseDebate ကိုကျွန်တော်မစမ်းခဲ့ဘူး၊ သတင်းတွေ၊ မွေးစားခြင်းကိုသိပ်မတွေ့ရဘူး၊ ဘယ်သူ့ကိုသုံးနေတာလဲ။
Disqus မှကြင်နာတတ်သူများသည်ကျွန်ုပ်၏ blog နှင့်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာများနှင့်မှတ်ချက်များကို XML မှတစ်ဆင့်တင်ပို့။ ၎င်းကို ၄ င်းတို့ကိုထောက်ပံ့သောအဖွဲ့သို့တင်ပို့သည်။ အခုသူတို့ကငါ့ဘလော့ထဲကမှတ်ချက်တွေအားလုံးကိုသူတို့ရဲ့အင်ဂျင်ထဲပြောင်းလိုက်ပြီ။ တော်တော်အေးမြ!
ဒီတော့… Disqus ရှိအဖွဲ့သားကိုမင်းရဲ့လျှောက်လွှာကိုအတန်းနိမ့်ကျတဲ့အတွက်တောင်းပန်ရမယ်။ ထိုအချိန်ကလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောအရာဖြစ်သော်လည်းယခုကျွန်ုပ်သည်ပရိသတ်တစ် ဦး ပါ။ မင်းမှာထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိတယ်၊ ငါ Twitter ပေါင်းစည်းမှုကိုနှစ်သက်တယ်။
Tags: မှတ်ချက် system ကိုမှတ်ချက်ပေးစနစ်Disqus
Leopard ရှိ Safari ရှိသင်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုပြောင်းလဲပါ
ဇွန် 16, 2009 မှာ 10: 06 pm တွင်
ငါတကယ် Disqus နဲ့ပြwithနာအချို့ရှိပေမယ့်သီအိုရီအရဒါဟာကောင်းတဲ့ plugin တစ်ခုပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး မှမှတ်ချက်ပေးသောအခါသူတို့ကကျွန်ုပ်ထံအီးမေးလ်များပေးပို့ပုံကိုသဘောကျသည်။ SezWho ကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည့်သူတို့စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ထင်သနည်း။
ဇွန် 16, 2009 မှာ 6: 15 pm တွင်
၀ မ်းသာပါတယ်။ ငါကူညီနိူင်ပါတယ်။ ) မင်းကအခြားအရာတစ်ခုကိုလိုချင်ရင်ငါ့ကို ping လုပ်ပေးပါ။
10:2009 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 46
ကျွန်ုပ်သည်လှေတစ်ခုတည်းတွင်ရှိနေပြီး WordPress မှ Disqus သို့သာသွားခဲ့သော်လည်းတူညီသောပြebနာများရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် IntenseDebate သို့ သွား၍ Disqus ကိုထပ်မံကြိုးစားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ID သည်အမျိုးမျိုးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Disqus သည် WordPress ၂.၈.၄ နှင့်အတူအခြားသူတိုင်းကြုံတွေ့နေရသောပြsameနာနှင့်တူသည်၊ မှတ်ချက်များကိုတင်သွင်းမည်မဟုတ်ပါ
ငါကပိတ်ထားခြင်းနှင့်အခြားအရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေရန်ရှိသည်တာပေါ့ ... ။ နောက်တဖန်လား
USB 3G ပါ
22:2011 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 3, 59
ငါသဘောတူဖို့လိုတယ် - DoAX2 ရှိ floppy strips-of-paper paper ဆံပင်သည်အမှိုက်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
14:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 11
ဒါဟာ disqus နှင့်အတူအလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်သော post ကို
30:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 09
30:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 59
ငါထင်သည်က spammers များသည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုလွန်စွာဆိုးရွားစေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် logins များကဲ့သို့သောနေရာတွင်တိုင်းတာရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်စီးပွားရေးဆိုဒ်များအတွက် - ၎င်းသည်သဘာဝကျပြီးအလားအလာနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုစုဆောင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 19, 2013 မှာ 9: 29 AM
ဇန်နဝါရီ 1, 2012 မှာ 9: 44 AM
ကျွန်ုပ်သည် Disqus ကိုအလွန်နှစ်သက်ပြီး install လုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ ဂူဂဲလ်နှင့် login လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသဘောတူပါ။ အနည်းဆုံး logging လုပ်ရန်၊ google, yahoo, facebook, twitter စသည်တို့ရှိသည်။
Hamza Ahmed က
22:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 08 တွင်
မတ်လ 26, 2012 မှာ 11: 44 AM
ဧပြီ 18, 2012 မှာ 6: 58 AM
ငါ disqus ဘယ်လောက်လူမှုရေးကြိုက်တယ်! လူမှုရေးအရသုံးစွဲဖို့အများကြီးစဉ်းစားနိုင်တဲ့တခြား“ သန့်ရှင်းတဲ့” မှတ်ချက်ပေးစနစ်ထက်နီးပါး။
16:2012 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 14
Disqus ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏ !!
မတ်လ 5, 2014 မှာ 9: 05 AM
၎င်း၏အကောင်းဆုံးမှတ်ချက်ပေးရန်ပလက်ဖောင်းဟုတ်မဟုတ်သေချာသည်, ဒါပေမယ့် Disqus သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုအတွက်အတော်လေးလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာခဲ့သည်။
မတ်လ 5, 2014 မှာ 9: 13 AM
ပလပ်အင်ကိုသုံးရန်သွေးဆောင်သည်၊ သို့သော်ယခုကိုင်ထားသည်။ FB မှတ်ချက်များအတွက်တစ်ခုအပါအဝင်ပလပ်ဂင်များစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။